Warbixinta waxqabadka Google Search Console waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato falanqaynta | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Warbixinta waxqabadka Google Search Console waxaa laga yaabaa inay saamayso falanqaynta
Warbixinta waxqabadka Google Search Console waxaa laga yaabaa inay saamayso falanqaynta
Google Search Console waxa uu lahaa arrin kale oo xog ah oo ku saabsan warbixinnada waxqabadka, markan saamaynaya Google Search, Google Discover, iyo xogta Google News. Google waxa ay sheegtay in tani ay ahayd "arrin ku saabsan falanqaynta" oo dhacay intii u dhaxaysay Febraayo 1, 2022 ilaa Febraayo 3, 2022.
Darajooyinka ma saameyn Tani waxay ahayd arrin falanqayn ah, hoos u dhac kasta oo ku yimaadda aragtida iyo gujisyada waxaa laga yaabaa inay la xiriirto arrinta diiwaan gelinta xogta ee aan la xiriirin wax isbeddello ah oo qiimeyn ah. Google ayaa yiri "tani waa kaliya arrin la xiriirta jarista; kama tarjumayso isbeddelka habdhaqanka isticmaalaha ama natiijooyinka raadinta Google."
Arinta. Google wuxuu sheegay in tani ay tahay "arrin ku saabsan falanqaynta." Google waxa uu qoray "Miisaanka waxqabadku waxa uu soo gaadhay dhibaato xidhidh ee falanqaynta Raadinta, Discover, iyo Google News." Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad aragto "qaar kala duwanaansho ah oo ku jira xogta waxqabadkaaga muddadan," Google ayaa ku daray.
Sababta aan u danayno. Hubi inaad sharaxdo warbixintaada, Google waxay horeba ugu dartay tafaasiil si toos ah warbixinada Waxqabadka. Laakiin haddii aad xogta u dirto macaamiishaada ama gudaha ku salaysan xogta Console, hubi inaad la xidhiidho xogtan warbixinahaas.
Taariikhda sii deynta Motorola Edge 30 Pro gudaha Hindiya ayaa shaaca laga qaaday
Sida loo helo Apple News xitaa haddii aan laga heli karin dalkaaga